HS:- Guud ahaan dalka Somaliya ayaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa maalinta farxada badan ee ciida, hayeeshee magaalda B/weyne oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Somaliya ayn aku nool yahiin shacab badan ayaa siweyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi maadaama ay maalinta berito ah tahay ciida.
Dad weynaha magaalada oo iskugu jira danyar iyo kuwo wax heysta intaba ,hadane maalintaani ciida waa maalin ku weyn bulshada oo ay faraxsan yahiin,maadaama ay dhamaatay bishii qeyrka badneyd ee ramadaanka.
Dhinaca kale magaalada B/weyne oo ka mid ah magaalooyinka dakja Somaliya ee dhawaan lagu so xuli doono xildhibaanada cusub ee 2016 ayaa waxaa gaaray waxgarad, siyaasiyiin iyo qurbajoog aad ugu dhuun daloola doorashadaas si ay usii kasbadaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan duubabka dhaqanka Hiiraan.
Hadaba muuqaaladan waa magalda Belet Weyne oo waxooga ka soo kabsaneysa qasaarahii ay geysteen biyaha wabiga walow ay shacbakii qaarkood weli ku sugan yahiin duleedka kore ee magaalada oo ay u qaxeen badankood markii ay biyahu ku fataheen gudaga magaalda halka tiro badana ay dib ugu soo laabteen guryahooda.
La soco wararkeena danbe iyo hadba sida ay shacabku u ciidaan maalmahan farxada leh.
· admin on July 05 2016 14:38:30 · 0 Comments · 1517 Reads ·
14,934,123 unique visits